Zimkhalele osolwa ngokudayisa izidakamizwa | News24
Zimkhalele osolwa ngokudayisa izidakamizwa
ISITHOMBE: SITHUNYELWE Osolelwa ukudayisa izidakamizwa utholakale ne-whoonga engu-151 kanye namaphilisi angu-62 ngoMsombuluko embonini yamatekisi aKwaDukuza.
OSOLELWA ukudayisa izidakamizwa uvele enkantolo yeMantshi yaKwaDukuza ngoLwesibili, ngomhlaka 26 kuMasingana (January).
Umsolwa, oneminyaka engu-40, uboshwe ngoMsombuluko, ngomhlaka 25 kuMasingana, kulandela amaphoyisa emthole nezidakamizwa.
Okhulumela amaphoyisa esifundazwe, uMajor Thulani Zwane uthe umsolwa uboshwe amaphoyisa e-iLembe Crime Intelligence kanye nawaKwaDukuza Crime Prevention.
Uthe: “Amalungu amaphoyisa abesebenzela KwaDukuza ngenkathi edonswa indlebe ngomuntu odayisa izidakamizwa embonini yamatekisi yaKwaDukuza. Utholakale ne-whoonga engu-151 kanye namaphilisi angu-62,” kusho uMajor Zwane.
UKhomishana wamaphoyisa aKwaZulu-Natal, u-Lieutenant General Mmamonnye Ngobeni unxuse umphakathi ukuthi uqhubeke nokubikela amaphoyisa ngabantu abadayisela ulusha izidakamizwa.
Uthe: “Amaphoyisa azoqikelela ukuthi labo abadayisa izidakamizwa bayaboshwa kanti futhi azowavikela amalungu omphakathi abikela amaphoyisa ngalezi zigilamkhuba,” kusho u-lieutenant General Ngobeni.